Fitiliana ny tsimok'aretina "Covid-19" :: Hanokatra laboratoara maromaro ny fitondram-panjakana • AoRaha
Hihazakazaka ny firosoana amin’ny fitiliana ny tsimok’ aretina « Covid-19 » eto Madagasikara. Laboratoara miisa telo eto Antananarivo renivohitra no hosokafan’ny fitondram-panjakana ato ho ato, ho fanafainganana ny fitiliana an’ireo olona ahiana ho voan’ity aretina ity.
« Ankoatrany « Institut pasteur » dia hosokafana sy hampiasaina ny laboratoara fizahana tsimok’aretina eny amin’ny oniversite eny Ankatso. Hampiasaina koa ny laboratoara fikarohana momba ny fahasalamana eny Androhibe sy ny etsy amin’ny hôpitaly HJRA », hoy ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny tafatafa fanaony nivantana tamin’ireo onjam-peo sy fahitalavitra manerana an’i Madagasikara, tamin’ny alatsinainy alina teo.
Manam-pahaizana malagasy momba ny fitsirihana sy fitiliana ny areti-mifindra no hiandraikitra ny asa amin’ireo laboratoara ireo. Isan’ny paikady nahafahan’i Korea Atsimo nifehy haingana ny tsy fiparitahan’ity tsimok’aretina ity ny fampitomboana ny isan’ny fitiliana natao tamin’ireo mponina tao aminy, raha ny hevitry ny Filohan’ny Repoblika.
« Izao isika vao tena mahalala fa ilaina ny laboratoara ary tena laharam-pahamehana tokoa ny fiahiana ny fahasalamam-bahoaka », hoy izy.
Tanjon’ny fanjakana ny fampiakarana tsikelikely ny isan’ny fitiliana hatao. Nohamafisin’ny Filohampirenena koa fa hitombo hatramin’ny 240 000 ny isan’ireo tokantrano homena fanampiana eto Antananarivo sy Toamasina. Ar 10 000 tapitrisa ny vola hatokana amin’izany.
Horonantsary mamoafady :: Tratra ilay lehilahy namoaka sarin-jazakely